Mo Faaraan qoricha atileetota si'eessu 'L-carnitine' fudhachuusaa amane - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, PA Media
Qorannoon garee 'BBC Panaroma'n' gaggeeffame akka ibsutti walitt dhufeenyi Mo Faaraah fi leenjisaa isaa duraanii, Albartoo Saalaazaar, kan hojiirraa dhorkame jidduu jiru gaaffiilee haaraa kaasisaa jira.
Mo Faaraan qoricha humna kennu 'L-Carnitine' Maraatoonii Landan kan bara 2014 dura fudhateera jechuun qorannoo hojjettoonni Dhaabbata Farra dooppingii Ameerikaa gaggeessaa turan haalee ture.
Booda garuu fudhachuu fi dhiisuu isaa akka hin yaadanne himuun yaadasaa jijjiireera.
Ragaan kunis qondaaltoonni Atiletiksii UK attamiin akka qorichicha Siwizarlaandii fichisiisuuf karaa Saalaazaar adeeman mul'iseera.
Ergaan imeelii qorannichaan bira gahame tokko akka mul'iseetti dura qondaaltoonni atiletiksii UK qorichichi 'miira ispoortii keessatti' nagaa qabeessa ta'uufi dhiisurratti yaaddoo qabaachuu himanii ture.
Odeeffannoon duuba jiru maal fakkaata?
Saalaazaar Pirojaktii 'Nike Oregon' jedhamu kan ogganu yoo ta'u, innis Faaraah kan lammiin Biritish ta'eefi bara 2011- 2017 shaampiyoonaa olompikaa ta'ef manasaa ture.
Qorannoon Panorama bara 2015tti Marsariitii Ameerikaa 'ProPublica' jedhamu waliin ta'uun gaggeeffame tokko akka mul'isetti, Saalaazaar leenjiisaa Mo Faaraahn akka atileetii Biriten beekamaa ta'uuf taasisuun galateeffatamee yeroo jalqabaatiif doping himateera.
Isaan boodas Saalaazaar waggoota afurif ispoortii irraa akka dhorkamuuf murteessitoota Ameerikaatiin Onkololeessa 2019 murtaa'e.
Saalaazaar himannicha haaluun murtee darberratti ol iyyannoo galfate.
Himannaawwan Saalaazaar irratti dhiyaatan keessaa tokko qoricha 'L-canitine' kan seeraan hayyamamee qoricha biraa waliin walitti makuun fudhate jedhamuun himatame.
Qorich 'L-canitine' jedhamu kunis cimina atileetootaaf akka kennuutti garaa garummaa sa'aatii jahaa keessatti ml 50 gadii akka fudhatamu Ejansiin Farra- Doping Addunyaa (Wada) ni gorsa.
Haa ta'u malee Faaraah bara 2014'tti maaraatoonii Landan isaa jalqabaatti saddeettii akka fudhate barameera. Waggaa sadii boodas dhimma kan mormuun gaazeexaan tokko gabaasee ture.
Ammantaan qoricha Mo Faaraah tibba sana fudhatee ml 13.5 ta'ufi kunis marii aanga'oota atileetiksii waliin taasifameen akka ta'e himame. Seera cabsu isaatiifis ragaan argame hinturre.
Ragaa haaraan maal mullise?
Qorannoon Panorama haaraan kun akka jedheetti,kunis dhiibbaa Saalaazaar mulisa.
Imeeliin qondaaltoota Atiletiksii UK qoricha kennuun dhiibbaa qabaachu malu irratti yaadoo qaban kan mulisuu ture. Dhumarattis altiletichi qoricha akka fudhatuuf waliigalame.
Haa ta'u malee gosti qoricha fudhatame kanaa UK keessatti argamu hindanda'amne.
Atileetiin tokko wayita dorgommiitti dhiyaachuuf jedhu dorgommichaaf guyyaan torba wayita hafu qoricha fayyadamuu fi dhiisuun isaa ni qoratama.
Mo Faaraan maaraatoonii Landaniif guyyaan ja'a wayita hafu qoratame.
Wayita sana garuu unka gosoonni qorichaa irratti guutamu irratti gosa dawaa 'L-carntine' jedhamu hin guunne ture.
Maraatooniin Landan erga gaggeeffamee waggaa tokko booda gareen BBC Panaroma Mo Faaraa waliin gaaffii fi deebii taasisee ture.
Gaaffii fi deebii sa'aatii shaniif ture keessatti Mo Faaraan battala tokkoofillee dawaa 'L-carnitine' fudhachuusaa hin amanne.
''An gonkumaa dawaa 'L-carnitine hin fudhanne. Harka 100 nan amana. Carraan ittiin an dawaa kana fudhadhuyyuu hin turre.'' jedhe Mo Faaraan.
Mo Faaraan gaaffii fi deebii erga BBC waliin taasisee booda nama Usada waliin gaafii fi deebii taasisee ture waliin wal arge.
Battaluma gara qorattootaatti fiigee adaraa keessan hin deeminaa jedhee gaafate Mo Faaraan.
Yaadasaas jijjiiree akkana jedhe,''Dhiifama naaf godhaa. Waantan ifa gochuu barbaadun qaba. Dawaa kana yeroo sana fudheera. Garuu waanan hin fudhanne natti fakkaatee ture.''jedhe.
Kanaafuu maraatoonii Landan dura dawaa L-carnitine jedhamu fayyadamteettaa jedhamee wayita gaafatamu,''eeyyee, dagadheen ture, amma garuu yaadadheera'' jedhee deebise.
Ergasii garuu Mo Faaraan yaadasaa bal'inaan kennuuf carraa bal'aa garee Paanaaroomaa biraa hin arganne.
Abukaatoon Mo Faaraa garuu xalayaadhaan akka ibsanitti L-carnitine hamma barbaachisuun olitti hin fudhanne taanaan seeraan ala miti jedheera.